Wakiilada beesha caalamka ayaa khadka internet kulan kula qaatay Siciid Deni si xal loogu…. – Hagaag.com
Wakiilada beesha caalamka ayaa khadka internet kulan kula qaatay Siciid Deni si xal loogu….
Posted on 21 Janaayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Wakiilada beesha caalamka ayaa maanta kulan khadka internetka kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Siciid Deni, iyagoo ka wada hadlay xal u helida caqabadaha doorashooyinka.
Kulankan ayaa qeyb ka ah kulamo xiriir ah oo saaxiibbada caalamka la yeelanayeen hoggaamiyayaasha dowladda federalka iyo dowladdaha xubnaha ka ah, iyadoo ujeedadu tahay in xal midaysan laga gaaro khilaafka doorashada ka taagan.
Saaxiibbada caalamka ayaa ku boorriyay Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni in uu sii wado xal u helidda caqabadaha doorashooyinka dalka iyadoo loo marayo Wadahadal iyo isu-tanaasul.
Dowladda federalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay abaabusho shir kale oo lagaga hadli doono sidii heshiis looga gaari lahaa khilaafka doorashada hareeyay, iyadoo lagu wado in meesha laga saaro qodobo dhowr ah oo ufududayn xalka doorashada.